Ngaba kufuneka utyale imali kuPhononongo lwe-Intanethi ukuze ulawule igama lakho? | Martech Zone
Ngaba kufuneka utyale imali kuPhononongo lwe-Intanethi ukuze ulawule igama lakho?
NgoLwesihlanu, Oktobha 30, 2015 NgoMgqibelo, Oktobha 31, 2015 Douglas Karr
Amazon, Uluhlu lukaAngie, Trustpilot, IngcebisoEzintathu, Yelp, I-Google Ibhizinisi Lwam, Yahoo! Uluhlu lwasekhaya, ukhetho, G2 Isihlwele, I-TrustRadius, Uvavanyo lweFreaks, Yeyiphi?, Ivenkile yeAppExchange, Glassdoor, Ukulinganiswa kweFacebook kunye noPhononongo, Twitter, kunye newebhusayithi yakho zonke iindawo zokubamba kunye nokupapasha uphononongo. Nokuba uyinkampani ye-B2C okanye ye-B2B… amathuba okuba kubekho umntu obhala ngawe kwi-Intanethi. Kwaye ezo zinto ziphononongwa kwi-Intanethi zinefuthe.
Yintoni uLawulo lweDumela?
Ulawulo lwegama yinkqubo yokubeka iliso kunye nokulawula igama lomntu okanye ishishini elikwi-intanethi. Ekuqaleni igama lobudlelwane noluntu, ukuqhubela phambili kweziphumo zophando lwezinto eziphilayo, imithombo yeendaba kwezentlalo, kunye neendawo zokuphononongwa koluntu zenze ukuba ulawulo ludumo lubaluleke kakhulu kwintengiso nakwinzame zentengiso.
Iinkonzo zokubeka iliso soloko ulumkisa inkampani ngexesha langempela xa uphononongo olubi luhanjiswa kwi-intanethi Ukuba uxelelwe ngokufanelekileyo kwaye uyaphendula, iinkampani zinokusebenzela ukulungisa impikiswano ngaphambi kokuba kwabelwane ngayo kwaye yenze nomonakalo ongakumbi. Kwangokunjalo, iinkampani zinokuxhamla ekusombululeni iingxabano ukuze abathengi babone iimpendulo ezilungileyo kwinkampani enqwenela ukubonelela abathengi bayo.
Amanani aphambili kuPhononongo lwe-Intanethi
Iipesenti ezingama-71 zabathengi ziyavuma ukuphononongwa kwi-Intanethi zenza ukuba zikhululeke kwisigqibo sabo sokuthenga.
I-83% yabaphenduli bathe bayakuthemba ukuphononongwa komsebenzisi ngaphezulu komgxeki.
Ama-70% abathengi badibana nohlolo okanye ukulinganiswa ngaphambi kokuthenga.
Ukuphononongwa kwabathengi kudala i-74% inyuke kwimveliso eguqulweyo.
Ukuphonononga kuqhuba i-18% yokunyaniseka okuphezulu kunye ne-21% ukoneliseka kokuthenga okuphezulu.
Akukho konke okuhle, nangona kunjalo. Kuqikelelwa ukuba i-10-15% yazo zonke iimpendulo zemidiya yoluntu ziya kuba zezobuxoki. Uphengululo lobuxoki luye lwafumana ingqalelo kubo bobabini urhulumente kunye nabathengisi abakwi-Intanethi. IAmazon iyamangalela Ngaphezulu kwewaka leenkonzo zokuphononongwa kwemveliso ezingezizo.
Inomdla weAmazon. Uphengululo lwenkohliso kwiAmazon aluyenzakalisi imveliso, kodwa balwenzakalisa uphawu lweAmazon kunye neendleko zalo kuba ukoneliseka kwabathengi kungakhokelela kwimbuyekezo ephezulu. Imigaqo yokusetyenziswa kweAmazon kuthintela uphononongo olungelulo, kwaye ifuna ukwaphula ikhontrakthi kunye nokwaphula imithetho yokukhusela abathengi
AbantuClaim.com inikezela abathengi kunye namashishini ithuba lokuthumela ibango kwaye balazise kuphela xa umamkeli engaphenduli okanye afune ukulungisa le meko. Akukho magqwetha okanye ulamlo luyimfuneko. Banikezele ngale infographic, Ukuhlaziywa koPhononongo.
Ke… impendulo ngokuqinisekileyo! Kuya kufuneka ujonge abantu bakho, ishishini lakho, kunye neemveliso zakho ezinamaqonga okubeka iliso ukuqinisekisa ukuba ungaphendula kwaye ugcine igama elihle kwi-Intanethi.
tags: AmazonUluhlu lukaAngieuphononongo lweshishiniukhethoukuhlolwa kwabaxhasiUkulinganiswa kweFacebook kunye noPhononongog2 isihlweleGlassdoorUGoogle ishishini lamUphengululo lwe-Intanethiibango labantuulawulo lwegamauphononongo lokujongaReviewsindawo yokuthengisaUvavanyo lweFreaksIngcebisoEzintathuumvaumphathiswaTwitterYeyiphi?Yahoo! Uluhlu lwasekhayaYelp
UGoogle usungula ulwazi lokuthenga… kwaye iyamangalisa!
Kutheni ndisebenza mahala kwaye uWil Wheaton usenokungachaneki